11- Shabeelada Dhexe wuxuu ka kooban yahay todobo degmo
9- Waqooyi Galbeed wuxuu isaguna ka kooban yahay afar degmo hargeysa oo caasimada gobolka ah dacar budhuq ber bera gebilay AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida...
5- Sool wuxuu isaguna ka kooban yahay afar degmo laas caanood waa caasimada gobolka caynabo xudun taleex AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida guri/ dhul...
17- Jubada hoose wuxuu ka kooban yahay shan degmo kismaanyo oo caasimada ah afmadow badhaadhe xagar jamaame AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida guri/ dhul iib...
3- Bari oo isaguna wuxuu ka kooban yahay 11 degmo boosaaso oo caasimada ah caluula badarbeyla rako ufayn waaciya qandala qardho xaafuun isku shuban AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo Dhulalka. AQALka waxay ka cawinaysa helida guri/ dhul iib...
11- Shabeelada Dhexe wuxuu ka kooban yahay todobo degmo jawhar oo caasimada gobolka ah balcad mahadaay cadale aadan yabaal warshiikh run rugood AQALka.com waa shirkad ku xeel dher iibinta & kiraynta Guryaha iyo...
Dhulkaan waa iib waxuu kuyaalaa jazeero$15000
Mashruucan Guryaha Turkiga